E-Journal: July 2009
လူသုံးယောက်က အုတ်ခဲတွေကို စီချနေကြတယ်တုန်း အနီးက ဖြတ်သွားဖြတ်လာတစ်ယောက်က “ဘာတွေလုပ်နေကြသလဲ” ဆိုပြီးမေးတယ်။
ပထမတယောက်က - “ဝမ်းရေးအတွက် အလုပ်လုပ်နေတာ မမြင်ဘူးလားကွ” လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။
ဒုတိယတယောက်က - “အုတ်ခဲတွေ စီချနေတာ မမြင်ဘူးလားလို့” ပြန်ပြောတယ်။
တတိယတယောက်က - “ငါက အလွန်လှတဲ့ အဆောက်အဦးတခုကို ဆောက်နေတာကွ” လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။
သုံးယောက်လုံးကတော့ အလုပ်တမျိုးတည်းကို လုပ်နေတာပါပဲ ဒါပေမယ့် ပြန်ပေးတဲ့ အဖြေတွေကတော့ မတူပါဘူး။
မေးစရာရှိတာက - သူတို့တွေရဲ့ အလုပ်အပေါ် သဘောထားတွေ ကွဲပြားကြသလား။ အဲဒီသဘောထားတွေကရော အလုပ်လုပ်ကိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ကို အကျိုးသက်ရောက်ပါသလား။
အဖြေကတော့ ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ “Yes” ပါတဲ့။
Three people were laying bricks andapasserby asked them what they were doing.
The first one replied, "Don't you see I am makingaliving?" The second one said, "Don't you see I am laying bricks?" The third one said, "I am buildingabeautiful monument." Three people doing the same thing gave totally different replies. The question is : did they have different attitudes? And would their attitude affect their performance? The answer isaclear yes.
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက ကေဇက် at 9:51 PM3comments
သုခမိန် : ကိုမာရေးသျှင်ရေ နေကောင်းကျန်းမာပါရဲ့လားဗျ
ကျွန်တော် ဒီရက်ပိုင်း မိသားစုကိစ္စတစ်ခုရှိလို့ အီးဂျာဘက်မလှည့်နိုင်ပါ။
မာရေးသျှင် : ဆရာသုရေ
နေကောင်းကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာအောင် သတိထားနေထိုင်လျက်ပါ။
အရေးကြီး၊ ချက်ချင်းလိုများကိုသာ ပထမဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပါခင်မျာ။
အီးဂျာက ကျနော်တို့ မြေပြင်ထားခြင်းမျှသာပါ။
တစ်နေ့ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါ စိုက်ပျိုးနိုင်ကြဖို့ရာသာ။
ကျနော်လည်း စာမေးပွဲများ၊ နောက်ဆုံးမိနစ်ပရောဂျက်များနှင့် မြန်မာပီပီ ဘာမထီပေါ့ခင်မျာ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြုံးပြုံးပျော်ပျော်ပေါ့ခင်မျာ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 10:06 AM 1 comments
ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ဖတ်အုံးမယ်ဆိုရင် မာရေးသျှင်
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 10:01 PM5comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 11:30 AM 8 comments
လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၀)နှစ်ကျော်က ဒိုင်ယာရီထဲမှာ ပွင့်အန်လျှံကျခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးတွေပါ။ ကျနော်ဘာသာဆို ရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါ။ အမေ တကူးတက သိမ်းထားပြီး တကူးတက ပို့ပေးလို့သာ ကျနော် ပြန်ဖတ်ရတာပါ။ ဟိုးအညာက အမေ့အိမ်ရဲ့အဝေး ရန်ကုန်(နေရာစုံ)မှာနေခဲ့တဲ့ ကျနော့်စာအုပ်အတိုအစ၊ ကဗျာအတိုအစတွေကို အမေ ဘယ်အချိန်က ဘယ်လို သိမ်းထားခဲ့လဲ ကျနော်မသိခဲ့ပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစာ အမေ တခုတ်တရ သိမ်းထားခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးတွေကို E-Journalမှာ သိမ်းထားဖို့ စိတ်ကူးရလာကာ အခု အကောင်အထည် စဖော်လိုက်တာပါ။ နောင် ရာစုနှစ်တစ်ခုစာ အဓွန့်ရှည်ကြာသော် ရှည်ကြာငြား အမေ့ရဲ့မြေးမြစ်များအတွက်ပေါ့ ခင်မျာ။
အဲဒီ ကဗျာတော်တော်များများ ဟာ ခေါင်းစဉ်ပေးမထားပါ။ ဒါကြောင့် “သိမ်းထားတဲ့ကဗျာ” ဟုသာ သိမ်းထားလိုက်တာပါ။
ရော်ရင့်ကြွေကျ ငုံ ဘဝဖြင့်။……….။
27.4.1998 (MON) 8:50am
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 4:12 PM4comments
အယ်ဒီတာအာဘော်အခန်းတွင် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ မကျဆုံးမီ တစ်ရက်အလို ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက် သောကြာနေ့တွင် မြန်မာ့အလင်း၊ စီးပွားရေး၊ ဟံသာဝတီရှေ့ ဆောင် သတင်းစာတိုက်များမှ အယ်ဒီတာတို့ကို ဒီးဒုတ်ဦးဘချို ပြောကြားခဲ့သည့်
ပထမ ဘရင်းဂန်း (၂၀၀)၊ ဒုတိယ စတင်းဂန်း (၁၀၀၀)။ ပျောက်ဆုံးတဲ့ လက်နက်တွေဟာ တကယ်တော့ ဖ.ဆ.ပ.လ ကို တိုက်ဖျက်ပြီး ကျုပ်တို့တစ်တွေကို သတ်ဖို့ပဲ။ ဒါပေမဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် ရိုးရိုးသားသားလုပ်နေတဲ့ ကျုပ်တို့တစ်တွေဟာ အကာအကွယ်တော့ ယူဖို့မလိုပါဘူး။ သတ်ရင်လည်း သေရုံပေါ့။ ခင်များတို့ကသာ တိုင်းပြည်ကြီး မမှောက်မှားရအောင် ထိန်းထိန်းအုပ်အုပ်ရေးကြပါဟူသော နောက်ဆုံးစကားဖြင့် လွမ်းဆွတ်ဖွယ် ရေးထားသည်။
(ဗိုလ်ချုပ်တို့ ကျဆုံးခဲ့စဉ်က စာနယ်ဇင်း မှတ်တမ်းတင်ခဲ့မှုများ - လှမြင့်(ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်) ၊ ချင်းတွင်းမဂ္ဂဇင်း အမှတ် (၄၀)၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၀၉ )
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 10:11 PM0comments
Only this time, we have learned that it will not be giants like Nkrumah and Kenyatta who will determine Africa's future. Instead, it will be you - the men and women in Ghana's Parliament, and the people you represent. Above all, it will be the young people - brimming with talent and energy and hope - who can claim the future that so many in my father's generation never found.
I am particularly speaking to the young people. In places like Ghana, you make up over half of the population. Here is what you must know: the world will be what you make of it.
But these things can only be done if you take responsibility for your future. It won't be easy. It will take time and effort. There will be suffering and setbacks. Opportunity won't come from any other place, though - it must come from the decisions that you make, the things that you do, and the hope that you hold in your hearts.
Freedom is your inheritance. Now, it is your responsibility to build upon freedom's foundation.
It is easy to point fingers, and to pin the blame for these problems on others. Yes,acolonial map that made little sense bred conflict, and the West has often approached Africa asapatron, rather thanapartner. But the West is not responsible for the destruction of the Zimbabwean economy over the last decade or wars in which children are enlisted as combatants. In my father's life, it was partly tribalism and patronage in an independent Kenya that foralong stretch derailed his career, and we know that this kind of corruption isadaily fact of life for far too many.
These steps are about more than growth numbers onabalance sheet. They're about whetherayoung person with an education can getajob that supportsafamily;afarmer can transfer their goods to the market; or an entrepreneur withagood idea can startabusiness. It's about the dignity of work. It’s about the opportunity that must exist for Africans in the 21st century.
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 9:45 PM 1 comments